Kugadziridza Email Dhizaini Kutora Kutarisisa kweWako Reader | Martech Zone
Chitatu, November 5, 2014 Douglas Karr
Mwedzi mishoma yapfuura pamusangano, ndakatarisa hurukuro inonakidza pamatanho anotorwa nemuverengi weemail pavanopinda mukati meemail yavo. Haisi iyo nzira iyo vanhu vazhinji vanotenda uye inoshanda zvakasiyana zvakanyanya kubva kune webhusaiti. Paunotarisa email, iwe unowanzo tarisa mazwi ekutanga emusoro wenyaya uye pamwe pfupiso yekutarisa yezviri mukati. Dzimwe nguva, ndipo panomira munhu anenge achinyorera. Kana ivo vanogona kubaya paemail vovhura iyo - vachiratidza chikamu chepamusoro cheemail icho chinoonekwa mune yavo email mutengi. Uyezve, kana pfungwa dzavo dzikabatwa, vanogona kupururukira pasi. Kune vamwe vatengi, pane kana inbetween nhanho yekuti kana vasingadi kuona mifananidzo - asi ndinotenda kuti hunhu huri kuenda zvishoma nezvishoma.
ichi infographic kubva kunaEmma inofamba nepakati peakakosha eemail ayo anotora muverengi kubva pakuda kuziva zvakadzama mukuita. Kutora manzwiro, kushandisa vanhu mumifananidzo, kutarisa pavara uye nechena nzvimbo kutyaira ziso kubva pakuona uchiita chiito… zvese izvi zvinhu zvinogona kuverengerwa kudzamisa kuvhura uye kudzvanya neako anonyorera.
Ini ndinonyanya kuda kutaura kwavo kwekuvhara neruvara, zvakadaro, uye ini ndaizoishandisa kune yega yega yezvakavanzika gumi nembiri!
Vateereri vese vakasiyana, saka zvakakosha kumhanyisa bvunzo kuti uwane ...
Isu takaona mimwe mibairo isinganzwisisike neakareba-kopi maemail anga asina mifananidzo yakawanda, uye mamwe maemail ayo aingova mumwe mufananidzo muhombe wakaunzwa uine chinongedzo. Izvo zvese zvinoenderana nevateereri vako, danho ravo rekutarisa, tarisiro yavo pakugamuchira email yako, uye nhanho ipi yechiitiko chezviitiko zvavari mairi. Zvichida vanoshuvira kuverenga rondedzero refu yezvipo zvako, kana vakagadzirira kudzvanya. bhatani uye kunyoresa. Iwe hauzive kunze kwekunge iwe waedza akasiyana mabatanidzwa. Uye usashamisike kana isiri iyo imwe-saizi-inokodzera-yese mhinduro. Nguva zhinji iwe unowana zviri nani mhedzisiro nekupatsanura uye kuyedza akasiyana akasiyana kune vako vanyori.
Tags: nzeveemail dhizainiemail infographicEmmaubongo hwevanhuemma yangumyemmaPsychology
Tora Zvemukati Zvako Zvinyorwe Zvakakurumidza neaya maMifananidzo Ekutungamira Matipi